हरेक दिन बिहान गर्नुहोस यस्ता योगासन, फेरिनेछ अनुहारको रुप हुन्छ यस्तो चमत्कार ! – Sanchar Patrika
हरेक दिन बिहान गर्नुहोस यस्ता योगासन, फेरिनेछ अनुहारको रुप हुन्छ यस्तो चमत्कार !
July 13, 2020 206
प्रतिदिन आधा घण्टा सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, उत्थान आसन, कपालभाती, धनुरासन आदि गरेर प्राकृतिक सौन्दर्य कायम गर्न सकिन्छ । छाला र केसलाई स्वस्थ एवं चम्किलो बनाउन प्राणायामको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । प्राणायामले शरीरमा प्राण वायुको प्रवाह बढाउँछ । प्राणायाम सही तरिकाले सास लिने सर्वोत्तम विधि हो । प्रतिदिन १० मिनेट मात्र प्राणायाम गर्दा पनि अनुहार एवं छालालाई राम्रो प्रभाव पर्छ । कपालभाती प्राणायामले शरीरको कार्बनडाइअक्साइड ह’टाएर रगतलाई शुद्ध गर्न मद्दत गर्छ । त्यसबाहेक पनि यहाँ केही आसनबारे चर्चा गरिएको छ, जसले खासगरी अनुहारको सुन्दरता बढाउन मद्दत गर्छ ।
Prevएक सय चार वर्षकी बृद्धाले जितिन को’रोना, घरमै बसेर निको हुने यस्तो र’हस्य
Nextनयाँ वर्षको पहिलो दिनमात्र फुल्ने र नेपालमा मात्रै पाइने यो हो अनौठो फूल !
सवारी साधनको नम्बर प्लेटमा देवनागरी लिपिको प्रयोग गराइन्छ: प्रधानमन्त्री ओली